nezvitima izvi hazvina kakawanda kutarisira somunhu kuti kupiwa chinhambwe pakati dzokugara. Kazhinji mhanya kamwe ose awa, asi izvi zvinogona anosiyana kubva nguva nenguva. zvisinei, nguva dzose zvakanaka kukumbira mamwe mashoko kana kutenga tikiti renyu. Kuwedzera nokuziva papurogiramu uye kufamba nguva ino chitima nzira, zvinokosha kuti hunotsigira matikiti dzenyu. Pane chivimbo chakasimba michina muchitima platforms kuti unogona kushandisa. All iwe kuita Vaiisa rakamanikana kuguma tikiti kupinda slots duku yeyero muchina uye kumirira kunzwa chidhindo.
Riomaggiore achava kana kuva chemabhazi wokutanga (kana uri kuenda kubva La Spezia) kana wechishanu chemabhazi (kana uri kuenda kubva Levanto). zvisinei, zviri kwazvo zvichida kuenda kuva chemabhazi nevakawanda Cinque Terre Vashanyi okutanga, sezvo ndiyo uchitsanya nzira kuti ikoko. Riomaggiore ndiko kuri dzemisha shanu, uye ndicho ndibatsireiwo guta kubva paka hofisi huru aripo. The zvivako vakahwanda zvose pamusoro mawere goronga, nzira yose kusvikira kaduku chiteshi. Pachimiro peeling Wedding dzimba ndiyo wakajeka uye tichagara mupfungwa dzako nokusingaperi. Zviri tarenda kuona kuona zuva ranyura, uye chinhu anofanira kuona kuti vakaroorana kuti kugoverana chaiyo nguva.
Mumwe nemumwe wemisha mishanu une runako rwakati. Corniglia yakakosha sezvo haisi building. zvisinei, chii isina mu mahombekombe, kupfuura inoumba nokuti vayo akasiyana runako. Corniglia anonzwa ari kure kupfuura ivo mimwe misha. zvisinei, rinopa mamwe ndagadzikana uye nemakanzuru mhepo. The musha chinowanzofuratirwa ayo rwakaoma mudungwe munzira. Kusiyana nevamwe misha kuti ingasvikwa nechikepe, Corniglia ari pamusoro pezvikomo uye haana gungwa kuwana. The chete nzira kusvika kune hike ari Cinque Terre nzira kana kuti kutora chitima. zvisinei, zvinokosha kucherechedza kuti chitima haringapembedzi iwe chero panyama nesimba. Uchiri kufanira kufamba mamwe masitepisi kuti usvike pakuru yemusha uye uone zvese zvinopihwa nemusha mudiki.
Corniglia ane maonero akanaka izvo zvinoita kuti iwe uone akawanda emakomo akapoteredzwa uye yakakura nyanza. The Belvedere mumusha inzvimbo huru kuenda uye kutora kunaka Cinque Terre. Kamwe ukaita kuti unogona kunakidzwa siyana mumusha inopiwa, kubva zvinoshamisa pesto kune zvinonaka waini. Corniglia ane akapfuma nhoroondo kuita waini, uye kana uri rombo zvakakwana kuti kushamwaridzana veko, unokwanisa kuravidza uye kudzidza pamusoro waini yavo.
Vernazza runoonekwa somumwe misha yakaisvonaka kwazvo kwete chete Cinque Terre, asi nyika yose Italy. zvirokwazvo ndiro yokupedzisira rine Cinque Terre kuti chinoita vazhinji adanane murwendo. It ane zvimwe kwezvokufuka uye zvetsika vanofunga kuti vamwe misha kushaiwei. Sangana kuti pamwe chaizvo nezvokudya uye anoshamisa zvinotyisa, uye iwe kuwana nzvimbo anovimbisa kechipiri. Ivai nechokwadi kushanyira Doria Castle apo muna Vernazza. Rine rimwe rokupedzisira shongwe yepakutanga kuti akadzivirira vanhu musha emakore apfuura.
Monterosso unto Mare zvechokwadi kupfuura touristy uye dzisina kufanana guta riri Cinque Terre. It ane motokari, hôtels uye hurungudo mahombekombe wakakwana nokuda vashanyi. Kana uchida kushanyira ichi zvinoshamisa chikamu Italy, asi vanosarudza munhu vibe zvikuru ano, ipapo Monterosso ndechenyu. Monterosso ane promenade kuti akakwana kuti manheru rinofamba, uye kunyange nani, vane dzokudyira yakanaka kuti achaita munhu vanonakidzwa zvomugungwa.
Unoda embed yedu Blog romukova “Quick Guide: How To Travel Cinque Terre By Train” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-travel-cinque-terre-train%2F – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)